Yaa culimada Gaalkacyo ku gumaaday? | Halganka Online
Yaa culimada Gaalkacyo ku gumaaday?
Faldambiyeedka saaka ka dhacay masjidka Towfiiq ee magaalada Gaalkacyo waa mid ku cusub Soomaaliya iyo intii muslim dago oo dhan, mana ahayn wax la dhaadayay in culimo ducaad ah oo masjid ku jira salaaddii subax laga la boxo oo albaabkiisa lagu laayo.
Falka noocan ah haddii uu ka dhici lahaa meelaha gaal iyo islaam wada dagganyihiin ama muslimiinta lagaga taag roonyahay cidda geysatayna ay gaalo yihiin fasirkiisa iyo fahankiisu ma adkaadeen, waxaase adag in falkani ka dhoco dhul dadka daggani ay muslim yihiin 100%.
Lama aqoonin dad Soomaali ah oo culimo Ilaahay daraaddiis u xamlan colaadiya ama dhibaateeya, in wax loodhimo iska daaye in laga seexdo oo aan la marti galinna dhaqan ma aheyn!.
Culimada la gumaaday ee tabliiqa ah sabab loo weeraro ma muuqdo dad lagu yaqaannaey inay siyaasad ka shaqeeyaanna ma aheyn, dunida oo dhan meel loo diidona ma jirto, wax ka badan inay dadka Ilaahay xusuusiyaan, khayrkana ugu yeedhaana laguma baranin.
Culimadan la gumaaday dadkii maydkooda wax ka qaaday waxay sheegeen inay ahaayeen odayaal wada da’ ah oo midka ugu yari lixdan jir ka weynaa. Waayeel intii lagu xurmeeyona uma dhimanayn oo cirrada culimanimo iyo cibaado ayaa u wehelisay.
Intaas oo dhan waxaa dheer cidna dakano kama ayna qabin oo dhiiggooda xaaraan buu ahaa nin Ilaahay iyo aakhiro yaqaannana kuma xadgudbeen, baasna kuma shaqshaqeen.
Arrimahaas oo dhami waxay ina tusinayaan in faldanbiyeedkani aanu aheyn wax diin ku lug leh ama la odhan karo colaad diineed buu xidhiidh la leeyahay, in kasta oo ay dhici karto in loo adeegsado dad la moodayo inay diin xidhiidh la leeyihiin ama la doonayo in sawirkaas laga qaato.
Falkan foosha xun ciddii doonta ha fuliso, cidda ka danbeysa se waxaa lagu ogaan karaa qodobadaan soo socda:
falkani wuxuu ka dhacay masjid waliba xilli salaad la sugayo; sidaas darteed xanuun aad u kulul inuu yeesho waa lagu talo galay sin in walwalba uu midka ugu dhow u warjeefo.
dadka la laayay waa culimo tabliiq ah oo la ogyahay inayna cidna col la aheyn; si taasi u noqoto dibiga gowrac weyshu ha ku quus-qaadatee. Haddii si kale loo dhoho waxaa la doonayaa in colaaddu baahdo oo wadaad iyo waranleba gaadho.
raga falkan geystay niman is qarinaya ma ayna aheyn, taas oo lga fahmi karo in lagu talogalay in isla markiiba laga aarsado dadka loo maleyn karo in ay ka tirsanaayeen.
goobta falkani ka dhacay waa meel u dhexeysa labada dhinac ee Gaalacyo, doorashadeedana waxaa muuqata in lagu talogalay; si colaaddu ugu baahdo labada dhinac ee magaalada.
falkani in goobta uu ka dhacay masjid aheyd waxaa loo fahmi karaa in la rabo in masaajidda dareen laga qaado, dadkuna ay diinta iyo dadkeedaba isla nacaan; si qalbigooda looga tirtiro halkudhegga baryahan danbe lagu celcelinayay ee ahaa shariicada ha lagu dhaqmo.
dadka sida gaarka ah loo toogtay waa dad aan Soomaali aheyn, waana farriin la rabo inay u gudubto dadka muslimiinta ah ee dacwo ahaan ama gargaar ahaan waddanka u yimaadda; si Soomaaliya looga go’doomiyo dunida muslimka ah, waliba waxaa intaas weheleya in la rabo in soomaalida laga faafiyo sawir ah inay muslimiinta necebyihiin, hay’adaha gaaladana jecelyihiin.
Arrimahaas oo dhan iyo kuwo kaleba waxay ina tusinayaan in falkan ay ka danbeeyaan gacmo shisheeye oo doonaya inay huriyaan fitno balaadhan oo la isgu baabo’o sida Ciraaq ka socota, waxaana muuqata inay tani hordhac u tahay dagaal loo yeelo waji diineed oo baddala kii qabiilka .
Danta laga leeyahay dagaalkaas diineedna way muuqataa inay tahay in dadka la nacsiiyo diin iyo wixii sheegtaba, iyo in dadka diinta sheeganaya la iska horgeeyo awooddoodana la isku jabiyo; si mashaariicda la rabo si dhib yari ah waddanka looga hirgashado.
Haddaba ururada diineed ee hubaysan waxaa laga rabaaa inay dabinkaas arkaan, kana feejignaadaan in lagu rido. Mar haddii ay caddahay in falkan xun aanu u danaynayn Soomaali ha ahaato qabaa’il ama ururo’e, isla markaana uu dhaawac weyn geysanayo diinta, sumcadda iyo xiriirka aynu la leenahay walaaleheena muslimiinta waxaa laga ma maarmaan ah in si wadajir ah la isugu kaashado sidii loo soo qabqaban lahaa gacan ku dhiiglayaasha sida xun u adeegsanaya qabaa’ilkeena iyo ururo diimeedyadeena.
Gabagabadii waxaan rajeynaynaa in dhacdadani ay u noqoto bulshada Somaliyeed digniin iyo baraarug, isla markaana si isku duubni ah looga wada horgato wax kasta oo wax yeelaya diinta, sumcadda iyo nabadgalyada shacabka Soomaaliyeed.
Afhayeenka Mujaahidiinta Al-shabab oo dhaleeceeyay Gumaadkii Culimada Tabliiqa ee Galkacyo »